Angry Birds Classic 8.0.3 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 8.0.3 လြန္ခဲ့ေသာ2ရက္က
ဂိမ္းမ်ား အေႂကြေစ့ထည့္ ကစားရေသာ ဂိမ္းခံု Angry Birds Classic
Angry Birds Classic ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အဆိုပါ Angry Birds ဂိမ်းများ၏ရှင်သန်မှုရှယ်ယာမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဥခိုးယူသူလောဘဝက်အပေါ်လက်စားချေထွက်ဟင်းလျာများ။ ဝက် '' ကာကွယ်ရေးဖျက်ဆီးဖို့တစ်ဦးချင်းစီငှက်၏ထူးခြားသောအင်အားကြီးသုံးပါ။ Angry Birds ဂိမ်းရူပဗေဒ-based ဂိမ်းနှင့်ပြန်ကန်တန်ဖိုးနာရီစိန်ခေါ်ပါရှိပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအဆင့်ကိုဖြေရှင်းနိုင်မှယုတ္တိဗေဒ, ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်အင်အားလိုအပ်သည်။
- 680 ကျော်အဆင့်ဆင့် - အားလုံး 15 ဦးကိုမူလ Angry Birds ဂိမ်းဖြစ်စဉ်များ Play!
- powerups နှင့်သင်၏ငှက်တို့သည် '' အဖျက်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ Boost ။
- Download နှင့်အခမဲ့ play!
- အော့ဖ်လိုင်း Play!
အခက်အခဲရှိနေပါသလား? https://support.rovio.com သင်အမေးအဖြေများ browse သို့မဟုတ်ကျနော်တို့ရဲ့ထောက်ခံမှုသိုးစုကိုရန်တောင်းဆိုမှုကိုတင်ပြနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာကူးခေါင်း!
- အသက် 13 နှစ်မှာကျော်တစ်ဦးပရိသတ်အတွက်ရည်ရွယ်သည်ဟုလူမှုကွန်ရက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှတိုက်ရိုက်လင့်များ။
- ကွာမည်သည့်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာ browse ဖို့အလားအလာနှင့်အတူဂိမ်းထံမှကစားသမားယူနိုငျသောအငျတာနကျမှတိုက်ရိုက်လင့်များ။
- ကို select လုပ်ပါမိတ်ဖက်ထံမှ Rovio ထုတ်ကုန်များနှင့်လည်းထုတ်ကုန်များ၏ Advertising ကြော်ငြာ။
- In-app ကိုဝယ်ယူမှုစေရန်အဆိုပါ option ကို။ အဆိုပါဥပဒေကြမ်းအခွန်ဆောင်သူအမြဲကြိုတင်တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
Angry Birds Classic အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Angry Birds Classic အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Angry Birds Classic အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Angry Birds Classic အား အခ်က္ျပပါ
lamune စတိုး 49.19k 14.46M
Angry Birds Classic ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Angry Birds Classic အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 8.0.3
ထုတ်လုပ်သူ Rovio Mobile Ltd.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.rovio.com/privacy
App Name: Angry Birds Classic
လက်မှတ် SHA1: 66:DA:91:77:25:31:13:47:4F:6B:30:43:B8:9E:06:67:90:2C:F1:15
အဖွဲ့အစည်း (O): Rovio Mobile Ltd
Angry Birds Classic APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ